DEG DEG: Barcelona oo fadeexad dhex taagan & booliiska oo weerar ku qaaday xarumaha naadiga (Madax la xirey) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DEG DEG: Barcelona oo fadeexad dhex taagan & booliiska oo weerar ku...
DEG DEG: Barcelona oo fadeexad dhex taagan & booliiska oo weerar ku qaaday xarumaha naadiga (Madax la xirey)
(Barcelona) 01 Maarso 2021 – Guddoonkii hore ee Barcelona Md Josep Maria Bartomeu ayaa ka mid ah dhowr nin oo ka tirsanaa maamulka Barcelona oo ay xabsiga u taxaabeen Booliiska Catalonia kaddib markii weerar lagu qaaday xafiisyadooda iyadoo musuq loo haysto.
Booliiska Catalan-ka ee Mossos ayaa weerar ku qaaday tas-hiilaadka naadiga goor dhowayd iyagoo soo qabtay dhowr qof oo kale oo aan weli la kashifin kuwa ay yihiin, balse waa 2-3 qofood.
Bartomeu ayaan wax howl ah u haynin camaaliqada Catalonia tan iyo markii ay is casileen isaga iyo Guddigiisa Fulintu bishii Oktoobar ee sanadkii tegey.
Waxaa Guddoomiyihii hore laga soo xirey isagoo ku sugan gurigiisa.
Fadeexad loogu magac daray ‘Barçagate’ ayaa soo daahirtay taasoo ku saabsan helitaanka dokumentiyo muujinaya in kooxda Barcelona lafteedu ay lacag ku bixinaysey iyadoo dhinac 3-aad adeegsanaysa sidii loo sumcad dili lahaa rag ka tirsan isla kooxda sida Lionel Messi iyo Gerard Pique sida uu kashifay El Larguero oo ka tirsan Cadena Ser.
Waxaa arrintani salka la geleysaa Bartomeu iyo raggii la shaqaynayey.
Previous articleRW Rooble & Midowga Musharrixiinta oo goow dhow shir uga furmay Muqdisho
Next articleDF Somalia oo muujisay inuu jahawareer ka haysto sidii loola tacaali lahaa cudurka Covid-19